Akụkọ - Sebter Auto accessories Co., Ltd.
Companylọ ọrụ anyị etinyela aka na nyocha na mmepụta nke ngwaahịa ịchọ mma ụgbọ ala na ngwaahịa ahụike na gburugburu ebe obibi. Anyị onwe anyị na-eji ngwaahịa nke aka anyị, ka anyị nwee ike melite ma melite n'ọdịnihu.
Igwe ihu ihu nke ụgbọ ala nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara abụrụwo ihe a ma ama. Ma mgbe anyị ji ahụmịhe ahụ mechara, anyị chọpụtara na parasol a na-amị amị mgbe ọ na-egbochi ya, ka ọ ghara ị nwere ike ịmịcha ma jụọ oyi.
N’iburu n’ụdị ụgbọ ala dị iche iche, ohere dị n’ụgbọala ahụ dị iche, yabụ anyị kpebiri ịgbanwe ụdị aka ahụ mgbe emechara nyocha, site na aka kwụ ọtọ na aka nke nwere ike gbagọrọ agbagọ ma ghara ịlaghachi, ka e wee tinye ya n’ọrụ. na ụdị dị iche iche, na nche anwụ nke ọma.
Na 2020, anyị mechara nwee ihe ịga nke ọma n'ịmepụta parasol nwere aka gbagọrọ agbagọ, nke nwere ike gbagọọ ihe ruru puku ugboro iri na enweghị mmebi. The ojiji mmetụta na-doro anya na mma.
A bịa n’ihe banyere ngwa ahịa, ndị mmadụ nwere ike ịnya ụgbọ ma ọ bụ enweghị ike ikwu ole na ole, mana ụjọ na-atụ m na ọ bụghị ọtụtụ mmadụ ga - ekwucha ya. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na mmụba nke mkpa dị iche iche nke ndị nwe ụgbọ ala, ụdị nke ngwa ngwa ụgbọ ala na-abawanye ọgaranya, ngwaahịa ọhụrụ na-apụta na-adịghị agwụ agwụ, na ọsọ nke nkwalite ngwaahịa na-agba ọsọ. N’obodo anyị, e nwere ụgbọala ndị emezigharịrị onwe ha oge ụfọdụ, nke na-aghọ ihe ngosi pụrụ iche na mpaghara ụzọ. Na mmepe nke ngwaahịa akpakanamde ruo ọtụtụ afọ, e nwere ọtụtụ ngwaahịa, na e nwere ọtụtụ n'ime ha. Enwere mpempe akwụkwọ ndị ọzọ, fom, n'úkwù, kapeeti, ihe mkpuchi oche, ihe mmado, ákwà mgbochi, ihe nkiri anyanwụ, mkpọchi anyanwụ, mgbochi mkpọchi ohi, akpa ikuku, akwa mkpuchi mkpuchi, eriri ekwentị, eriri nchekwa, temometa, ihe ntụgharị, ntụgharị ihu. wheel, electrostatic tapawa, mgbochi nkukota mama, kapeeti, ịchọ mma, senti oche, wdg
Ọ bụrụ na e kewara ya na otu, a na-ekewa ngwaahịa akpakanamde n'ime ngwaahịa eji achọ mma na ngwaahịa arụ ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala na-azụta ngwaahịa arụ ọrụ, ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala ọhụrụ na-azụkwa ihe ịchọ mma maka ụgbọ ala kachasị amasị ha. Ihe eji achọ mma nke ụgbọ ala ọhụrụ bụ roba ala, mkpuchi ụgbọ ala, akpụkpọ ahụ na-agbawa agbawa, mpempe ụkwụ, mkpuchi oche, aka aka, isi, ihe mgbochi izu ohi (Pai Dangsuo), ịgbanye radar, akpụkpọ ahụ na-egosi mgbawa na ihe ndị ọzọ. Ihe onye na-ere ahịa na-atụ aro onye nwe ụgbọ ala ahụ bụ gluu ala, ihe mgbochi na-ezu ohi, akpụkpọ ahụ na-egosi mgbawa na ịgbanwe radar.
N'ọdịnihu, anyị ga-anọgide na-enwe ụkpụrụ nke ijikọta iji aka anyị na nzaghachi ndị ahịa, ma nọgide na-emeziwanye ngwaahịa ochie, mepụta ngwaahịa ọhụrụ, ma nye ndị ọrụ ụgbọ ala ngwaahịa dị mfe dịka o kwere mee.
Post oge: Apr-07-2021